Afanye gị ama na ndị a ukwuu gam akporo egwuregwu | Gam akporosis
Ọ bụrụ na ị na-ele anya egwuregwu ọhụrụ iji kporie ndụ ma nwee ezigbo oge, ma ọ bụ ọtụtụ oge dị mma, na ngwụcha ụka a na-eme ọtụtụ ihe zuru oke nke gam akporo ekwentị gị, mgbe ahụ ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị n'ihi na taa Gam akporosis anyị chọrọ ka ị nwee anụrị.
N'iji eziokwu ahụ bụ na anyị adịlarị na Satọde (ma ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-achọ ihe ngọpụ ọ bụla) yana ọtụtụ n'ime unu abanyela ezumike ma ọ bụ na-enwe ezumike izu ụka, anyị chọrọ iwepụta ụfọdụ Egwuregwu gam akporo, ha niile na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, ma dịkwa ọhụrụ n'ihi na ha bụ ndị kachasị mma bịara Google Play Store na July gara aga. Ka anyị gaa ebe ahụ!
1 Arkanoid na Space mwakpo
2 Akara / Order Ukwu
4 Grand Prix Akụkọ nke 2
Arkanoid na Space mwakpo
Arkanoid na Space mwakpo bụ kpọmkwem ihe ị na-eche, nke Nchikota nke egwuregwu abuo kachasi egwu nke ihe nile. N'ịbụ nke ụlọ ọrụ a ma ama na Square Enix mepụtara, ọ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ ọhụrụ nke nwere àgwà ochie nke ga-akpọte agụụ nke ọtụtụ ndị ọrụ. O nwere ihe nke Arkanoid na Space invaders mechanics. Ihu ọma, arụzi mejupụtara ibiaghachi ihe na mwakpo ibibi ha. Ee e, ọ bụghị egwuregwu kachasị mgbagwoju anya n'akụkọ ihe mere eme, agbanyeghị na ọ na-atọ ụtọ ma nwee oke nhịahụ nsogbu (150), na ikike iri abụọ ị ga-emeghe, yana mkpụrụ edemede iri anọ, nke ọ bụla nwere ikike nke aka . Ọzọkwa, n'agbanyeghị na ọ na-efu € 3,99, ọ nweghị ihe ịzụrụ na ngwa, yabụ ị ga-akwụ ụgwọ naanị otu ugboro.
Akara / Order Ukwu
"Fate / Grand Order" bụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu ma ọ bụ Anime-themed RPG na onye akuko ya dabere na anime nke otu aha. Ọ na-etinye akụkọ ya na anime aha. Na egwuregwu a ị ga-eme dị ka ihe odide na usoro na gị ozi ga-azọpụta ụwa. Iji mee nke a, ị ga-n'oru odide ndị na-egwu na-alụ ọgụ na n'ihi gị na-emeri agha larịị.
Akara / Order Ukwu Ọ bụ egwuregwu nbudata n'efu nke nwere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe na ngwa.
Atebọchị ịtụ anya
Pathos bụ a egwuregwu dabere na mgbaghoju anya nke mechara Storelọ Ahịa Google Play. Onye na-egwu egwuregwu a bu Pan, nwatakiri nwanyi gha aghaghi ichi uwa. Ka akụkọ ahụ na-aga n’ihu, na egwuregwu ahụ, ị ​​ga-enyocharịrị ụwa ahụ, ma maka nke a, ị ga-enwerịrị dozie otutu ilu, ilu na ajuju, na-agbago site n'ọkwa ruo n'ọkwa ma soro ya, na-eme ka nsogbu ahụ ka njọ. Ọ bụ egwuregwu dị oke egwu na Storelọ Ahịa Play, na-enweghị ihe ọ bụla na ihe ọ bụla na-erughị 4,9 n'ime 5 n'oge ederede post a.
"Pathos" nwere ụfọdụ egwuregwu dị ka "Ncheta Ndagwurugwu" na ọbụlagodi "Lara Croft GO". Ọ nwere Nsogbu isii agbakọta n'ime ngụkọta nke isi isii. Dịkwa ka egwuregwu mbụ anyị hụrụ, Pathos Ọ nwere ụgwọ nke € 2,19 na ị ga-akwụ ụgwọ otu oge, na-enweghị mgbasa ozi na enweghị ịzụta n'ime ngwa ahụ.
Developer: Indie ndị mmeri
Ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu agba na ịgba ọsọ, "Grand Prix Story 2" bụ otu n'ime egwuregwu gam akporo ị chọrọ ịnwale izu ụka a. Anyị agwaworị gị maka ya n'oge ọzọ ma ọ bụ egwuregwu na-atọ ọchị ma dịkwa mma. Dị ka a sequel ka otu n'ime ndị kasị ewu ewu racing ịme anwansị egwuregwu, na Grand Prix Akụkọ nke 2 ị nwere ike kpọkọta ma jikwaa ndị otu egwuregwu gị, were ndị ọrụ, ndị ọkwọ ụgbọ oloko, na n'ezie, isonye na agba di egwu na agba oso N'ime nke ị ga - emerịrị iji merie ihe nrite na nnukwu ego. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ ka ị bụrụ otu kachasị mma. Ọ bụ egwuregwu nwere ezigbo njirimara maka ndị ọrụ n'ihi na, n'eziokwu, ọ nwere 4,5 nke 5 na Storelọ Ahịa Play n'oge edere post a.
Grand Prix Akụkọ nke 2 bụ a free download egwuregwu na mgbasa ozi na na-ngwa ịzụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nweta ọtụtụ ihe na ama gị na egwuregwu ndị a dị jụụ gam akporo